Ethiopia oo dad Muslimiin ah jeel u Taxaabtay – Xeernews24
Ethiopia oo dad Muslimiin ah jeel u Taxaabtay
4. Januar 2017 /in WARAR/NEWS /von admin
Maxkamada sare ee Itoobiya ayaa maanta 20 ka mid ah dadka u ololeeya xuquuqda muslimiinta dalka ku xukuntay xadhig ilaa 5 sano iyo badh. Dadkan ayaa dhamaan bishii hore lagu helay inay doonayeen inay dalka ka dhisaan dawlad Islaami ah.
Muslimiinta ayaa diiday xukunka maxkamada iyaga oo sheegay kaliya inay ka hadleen faragalin dawladu ku samsay gollaha sare ee muslimiinta Itoobiya u taliya oo doorashadiisa xukuumadu soo faragalisay.
Sidoo kale, dadka la xukumay ayaa u dooday culumo muslimiin ah oo dawladu horey u xidhay oo xubno ka ahaa golle lagu magaacabo ‘ Codkayaga hala maqalo’.
Maxakamada ayaa muslimiinta u couskatay xeerka muranka dhaliye ee lidka argagixisada. Ururada u dooda xuquuqda aadanha ayaa rumaysan in sharciga loo soo saaray si loo aamusiiyo dadka ka soo horjedda dawlada, laakiin xukuumada ayaa ku andacootay in xeerku muhiim u yahay sugida amaanka.
Muslimiinta maanta la xukumay waxaa ka mid ah laba wariye oo qoraa ka ahaa wargeys ka hadla arrimaha muslimiinta Itoobiya.
Muslimiinta Itoobiya ayaa aaminsan in la takoora oo xuquuqda muwadanimo ayna helin iyaga oo cabshadaas ku muujiye mudhaaradyo dhacay 2011. Banaanbaxyadaya ayaa sababay qaqabashada culumo waaweyn oo dalka laga yaqaan.
Xukuumada Itoobiya ayaa la tacaalaysa kacdoono kala duwan oo isugu jira kuwo siyaasadeed, qoomiyadeed iyo kuwa salka ku haya diimaha oo dhamaan ka cabanaya inayna nidaamka jira ku haysan xuquuqo aasaasi ah.
Qareenkii u doodaye muslimiinta ayaa xusay inuu racfaan ka qaadanayo xukunka isaga oo intaa ku daray in maxaabiista si xun loola dhaqmay intii ay ku jireen xabsiga Qiliti. Qareenka ayaa sheegay in muslimiinta xitaa loo diiday inay cibaadaysataan.
Dadweynha Itoobiya ayaa rumaysan in nidaamka garsoorka dalku uuna xor ka ahayn siyaasada iyada oo dadka aqoonta u leh sharciga ayna xirfadooda si madaxbaan u adeegsan karin.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/01/justic-300x176.jpg 176 300 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2017-01-04 09:17:392017-01-04 09:17:39Ethiopia oo dad Muslimiin ah jeel u Taxaabtay
Jaamacadda Carabta oo soo dhaweysay furitanka howlaha Baarlamaanka cusub ee... Daawo Sawiro ay Sawirtay Kamarada CCTV gaadhigii lagau Fuliyeey Weerarki sh...